Miti yemichindwe muchando neLuz Gabás | Zvazvino Zvinyorwa
Miti yemichindwe muchando neLuz Gabás
Alberto Makumbo | | Type, Mabhuku, Literature, Romance novel
Berta Vázquez mune inoenderana firimu yePalmeras en la Nieve, naLuz Gabás.
Kunyanya ane mukurumbira mushure mekuratidzwa kwechinangwa chake chekuda kuita firimu muna 2015, Miti yemichindwe muchando neLuz Gabás Rwendo rwekuenda kuchitsuwa cheFernando Poo, muSpain Guinea, iyo inovhura nhaurwa nyowani kune veruzhinji dzinoda nhoroondo dzenhoroondo kwete pasina kudanana.
1 Zvinyorwa zveMiti yeMichindwe muChando
2 Miti yemichindwe mavara muchando
3 Miti yemichindwe muchando: Exotic Spain
Zvinyorwa zveMiti yeMichindwe muChando
Iri gore ndi1953 uye Kilian, murume wechidiki anobva Huesca, anotanga rwendo nemukoma wake Jacobo kuchitsuwa chemashiripiti, Fernando Poo, iyo panguva iyoyo yaigara nevaSpanish. Yakasviba uye yakasarudzika, ino nzvimbo inogara mapurazi akasiyana uye masocoa emamwe evarume vakapfuma muSpain, nepurazi reSampaka riri iro rinogadzira zvakawanda zvekusimudzira nhoroondo.
Zano rinonyatsoteverwa Clarence, mwanasikana uye muzukuru waJacobo naKilian zvakateerana, avo vakatanga kuferefetwa muna 2003 nezve mavambo avo vachienda kuna Fernando Poo.
Tambo mbiri dzekupangana dzinopindirana kugadzirisa kupokana uye kudanana kwemakore gumi ema50s apo babamunini vake Kilian vakapedzisira vayambuka mutsetse une njodzi nekudonha murudo neakaberekerwa, Bisila, zvinowirirana nenguva dzemhirizhonga pakati pevagari vemo, kunyanya pakati peBubi neFang, uye veSpain colonizers.
X-ray yakakwana yechiitiko kusvika parizvino isina kunyanyo shandiswa mumabhuku sezvo hwaive hupenyu muFernando Poo izere nemisiyano, miganho uye zvishuwo zvakarasika izvo zvinopa nyaya yaClarence.
Miti yemichindwe mavara muchando
Palmeras en la Nieve chiitiko chinonakidza chevanyori vakabatwa pakati petsika uye chishuwo, tsika nerusununguko, vachiumba nyaya yakasarudzika. Aya ndiwo mavara makuru munoverengeka:
Killian: Iye protagonist wenyaya haana kumbobvira asiya makomo eko kwaakaberekerwa Huesca kusvikira muna 1953 afunga kunyorera, pamwe nemunin'ina wake Jacobo, mune yekushanya kunoshanda muFernando Poo, chitsuwa cheinhasi cheEquatorial Guinea chakatorwa neSpanish. Kilian achatanga kushanda papurazi kwaanozoisa hukama hutsva nevamwe veko, kusanganisira Bisila.
Bisilah: Kuva werudzi rweBubi, Bisila musikana anoshamisira anowira mumaoko aKilian mushure mekubatana naye paakasvika papurazi. Bisila ndemumwe wevanyori vanonyanya kufadza mumutambo uyu, nekuti kunyangwe aine manzwiro pamusoro pe protagonist, anonzwa akapatsanurwa pakati pemurume waanoda netsika dzakawanda dzinoiswa nevanhu vake.
James: Mukoma mukuru waKilian, Jacobo hunhu hunotambura nenjodzi zhinji, ndosaka achifunga zvekuenda naKilian kuna Fernando Poo kunoshanda nababa vake Antón papurazi reSampaka. Iye anodakadza asi ane hupenyu uye anokonzeresa kuzvipira.
Julia: Mukadzi uye pamberi penguva yake, Julia musikana anofara uye anorota mukadzi anogara papurazi reSampaka. Iye anogadza yakasarudzika kusangana neKilian kubva panguva yekutanga, ari musikana ane mazano anogara achipwanywa nenguva nenzvimbo maanofanira kugara.
Clarence: Mushure mekuwanikwa kwetsamba isinganzwisisike, Clarence, mwanasikana waJacobo nemunin'ina waKilian, vanofunga kutanga rwendo kuenda kuna Bioko wemazuva ano kuti vawane nhoroondo yemadzitateguru avo uye zvese zvakavanzika zveSampaka estate.
Anton: Sekuru vaClarende nababa vaKilian naJacobo murume wesimbi anoshora chero shanduko diki munzvimbo yake, kunyanya paanobva kuHuesca achienda kuGuinea kunoshanda nevana vake vaviri.
Miti yemichindwe muchando: Exotic Spain
Luz Gabás, munyori wePalmeras en la Nieve.
Pakati pemakoto ese munhoroondo yeSpain, nguva yekukundwa kwaFernando Poo, muzuva razvino reEquatorial Guinea, ndiyo yaive isinganyanyo kurapwa mumabhuku nemumabhaisikopo. Ichi ndicho chikonzero chakatungamira Luz Gabás kunyatsoongorora icho chinoshamisa nyika yedu kuburikidza nehunhu hwayo, misiyano uye cocoa minda iyo, kunyanya muma50, yakava magineti kune avo vese veSpanish vakatsvaga kutiza kubva kuhurombo nekuita mari kumwe kunhu.
Mushure memwedzi yekutsvaga, izvi BA muChirungu Philology yakaburitswa nyaya mbiri, iya yaClarence nasekuru vake Kilian, vakaputirwa mune yekuratidzira yenyika yepachivande iyo yakabata pfungwa yeCatalan imba yekutsikisa Tema de Hoy, iyo yakaburitsa inova muna 2012, ichiva chakanyanya kutengesa uye chakashandurwa mune mimwe mitauro senge chiItari neDutch.
Zvisinei, kubudirira kukuru kwebhuku kwakauya nekuda ayo firimu adapta, iyo yakaburitswa muna Zvita 2015 mushure mekugadzirwa kwemamirioni gumi emadhora nenzvimbo dzakasiyana muSpain, Colombia, Gambia neSenegal. Nyeredzi Mario Casas, Berta Vázquez, Emilio Gutiérrez Caba, Adriana Ugarte, Macera García naAlain Hernández, firimu rakave rakabudirira muhofisi yebhokisi, ichibatanidza kugona kweSpanish sinema kuita chinzvimbo chekunyora chinzvimbo.
Mushure mekubudirira kwePalmeras en la Nieve, Luz Gabás yakaburitsawo mamwe mabhuku maviri: Dzokera kuganda rako, Yakaburitswa mu2014 uye yakaiswa muPyrenees yeHuesca iyo yakave iyo huru yekugadzika yenyaya yerudo; Y Semoto uri pachando, rakaburitswa muna2017 rinoitika muzana ramakore rechiXNUMX pakati pemakomo eFrance neSpain.
Miti yemichindwe muchando cheLuz Gabás ndeimwe yemakuru vanotengesa zvakanyanya VaSpanish vemakore gumi. Chiitiko chinonakidza chekutsvagisa chinokwanisa kutitumira kuAfrica yekubatana, iya yemabhanana akafukidzwa nemadzinza emuno, dzimba dzekoloni dzinogarwa nevaSpanish vanoda uye nyaya dzerudo dzinoedza kudzikamisa mitemo yenyika.
Ungada here kuverenga Michindwe muchando neRuz Gabás?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Miti yemichindwe muchando neLuz Gabás
Agatha Christie: mabhuku